Mi Max 2Vivo V7 Nova 3eMeizu Pro6အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Mi Max 2Vivo V7 Nova 3eMeizu Pro 6
ရောင်းချသူ: Kyaw Myo Htoo
Mi Max2(Global version) Global အလုံး (Ram 4,64GB)
Like New.. All ass with box, 11 လပိုင်းက 369,000 နဲ့ဘောင်ချာပါ. Warranty6လကျန်.. Gamer တွေအသည်းစွဲ..
Vivo V7 (Black) Like new. ဘူးပစ္စည်းစုံ. Warranty 10 လကျန်
(Ram 4,32GB) , Camera ရှယ်. Full view display အလန်း.
Nova 3e (Black) 99% Like new. Box and all ass.
Ram 4,64GB, လန်းတာကတော့ထွေထွေထူးထူးမပြောတော့ဘူး
Meizu Pro6, 99% ရှယ်သန့်. Meizu ရဲ့ အလန်း အမြင့်ဖုန်းလေး
Display AMOLED ကိုသုံးထားလို့ရုပ်ထွက်ရှယ်လန်း..
Camera 21MP ရှယ်.''.phone only.''
အမည်: Mi Max 2Vivo V7 Nova 3eMeizu Pro 6